INCOKO | NORAJESH KALARIA
UPROFESA weYunivesithi iNewcastle, eseNgilani, uRajesh Kalaria ebefunda ngengqondo yomntu kangangeminyaka engaphezu kweyi-40. Wayekholelwa ekubeni izinto zazivelela. Kodwa ekuhambeni kwexesha yatshintsha loo nto. UVukani! umbuze ngomsebenzi nangokholo lwakhe.
Khawusixelele ngecawe yakowenu.
Utata wazalelwa eIndiya, umama yena wazalelwa eUganda kodwa naye ngowaseIndiya. Ubomi babo babulawulwa kakhulu zizithethe zamaHindu. Mna ndingumntwana wesibini kwabathathu. Sasihlala eNairobi, eKenya. Babebaninzi abantu abangamaHindu ababehlala kufutshane.
Yintoni eyakwenza wanomdla kwisayensi?
Ndandisoloko ndinomdla kwizilwanyana, mna nabahlobo bam sasidla ngokunyuka iintaba size silale ezintenteni emahlathini sifuna ukubona indlela emangalisayo eziphila ngayo. Ekuqaleni, ndandifuna ukuba ngugqirha wezilwanyana. Kodwa emva kokuba ndipase ekholejini eNairobi, ndaya eUniversity of London, eNgilani, ukuze ndifunde ngezifo. Ekuhambeni kwexesha, ndaba yingcaphephe ekuphandeni ngengqondo yomntu.
Ngaba izinto owawuzifunda zazitshintsha iinkolelo zakho?
Ewe. Njengoko ndandifunda isayensi kwakusiya kusiba nzima ukuzikholelwa iintsomi nezithethe zamaHindu, njengokunqula izilwanyana nemifanekiso.
Yintoni eyakwenza wayikholelwa into yokuba izinto zazivelela?
Ndisemtsha, abantu abaninzi endandichitha ixesha nabo babekholelwa ukuba izinto zaqala ukuzivelela eAfrika ibe sasisoloko sixoxa ngale nto esikolweni. Eny’ into, nootitshala bethu nooprofesa baseyunivesithi babesenza sicinge ukuba bonke oososayensi abaziwayo bakholelwa ukuba izinto zazivelela.
Ekuhambeni kwexesha wayeka ukukholelwa ukuba izinto zazivelela. Kwakutheni?
Umntu endandifunda naye wandibalisela ngezinto awayezifundiswa ngamaNgqina KaYehova. Ngelo xesha ndandisele ndineminyaka ndifunda ngebhayoloji nangamalungu omzimba. Zandenza ndanomdla ezo zinto wayezifundiswa. AmaNgqina KaYehova aba nendibano kwiholo yekholeji yethu eNairobi, ndaya. Zange kube kudala, amaNgqina amabini andicacisela ngezinye izinto ezifundiswa yiBhayibhile. Iinkolelo zawo zazingavakali ngathi ziintsomi, ayekholelwa kuMdali Ozukileyo oneempendulo zeyona mibuzo ibalulekileyo ngobomi. Ndandiyibona iyeyona ivakalayo le nto.
Ngaba izinto owawuzifundile ngezonyango zazisenza kube nzima ukukholelwa ukuba izinto zadalwa?
Zange, endaweni yoko, njengoko ndandifunda ngamalungu omzimba, ndaye ndabona indlela ezenziwe kakuhle nezintsokothe ngayo izinto eziphilayo. Ukuthi yonke le nto intsokothe ngolu hlobo yazivelela kwakungasavakali kum.
Ndaqala ukufunda ngengqondo ukususela ekuqaleni kweminyaka yoo-1970 ibe isandimangalisa nanamhlanje. Iyacinga, ize ikhumbule izinto ezininzi futhi yiyo elawula izinto ezenziwa ngamalungu amaninzi omzimba. Yiyo esitolikela yonke into eviwa neyenzeka ngaphakathi nangaphandle kwimizimba yethu.
Eyona nto ibangela ingqondo isebenze ngolu hlobo yindlela entsokothileyo eyenziwe ngayo kwaneeseli zayo ezibalulekileyo ezibizwa ngokuba ziineurons. Ingqondo yomntu ineeneurons ezininzi kakhulu ezidityaniswa yimicu emide ebizwa ngokuba ziiaxons. Ineuron inye iyakwazi ukudibana namawaka ezinye iineurons ngemicu ebizwa ngokuba ziidendrites. Ngenxa yale nto, kuninzi kakhulu ukudibana kweeneurons okwenzekayo engqondweni! Eyona nto imangalisayo kukuba, nakubeni ezi neurons needendrites zininzi kwaye zixinene kangaka, azenzi njee nokuba kukanjani, umsebenzi wazo ziwenza ngocwangco.
Indlela eziphithana ngayo ezi neurons needendrites isebenza ngolona cwangco lungathethekiyo xa umntwana ekhula esibelekweni sikanina nasemva kokuba ezelwe. Iineurons zithumela imicu kwezinye iineurons ezikude ngeesentimitha nje ezimbalwa, phofu ke ngumgama omde kakhulu lowo kwiiseli kuba zincinci kakhulu. Eny’ into, kusenokwenzeka nokuba naloo mcu awuthunyelwanga kwiseli epheleleyo kodwa kwindawana nje ethile yayo.
Njengokuba umcu usuka kwineuron, ukhokelwa yimichiza ethile, ngokungathi kunjalo, imana isithi kuwo “yima,” “hamba” okanye “jika ke ngoku,” de uyokufika apho uthunywe khona. Ukuba ibingakhokelwa le micu, ibiya kulahleka. Yonke le nto iqala kwimiyalelo ekwiDNA yethu ibe yenzeka kakuhle nangendlela echuliweyo.
Le nto ibonisa ukuba soze siyazi ngokupheleleyo indlela ekhula nesebenza ngayo ingqondo, ekwazi ngayo ukucinga nokukhumbula izinto nendlela ekwazi ngayo ukwenza sibe neemvakalelo. Kwainto yokuba ingqondo isebenza, ndingasathethi ke ngendlela emangalisayo esebenza nekhula ngayo, indenza ndiqiniseke ukuba ukhona umntu onamandla angaphaya kwawethu.
AmaNgqina andibonisa ubungqina bokuba iBhayibhile iliLizwi likaThixo. Ukwenza nje umzekelo, iBhayibhile ayoncwadi yesayensi, kodwa xa ithetha ngezinto zesayensi isoloko ichanile. Iziprofeto zayo nazo zichanile. Ilungisa ubomi babantu abazisebenzisayo izinto ezifundisayo. Ndiyibone apha kum loo nto. Oko ndaba liNgqina LikaYehova ngo-1973, bendisoloko ndikhokelwa yiBhayibhile. Loo nto indincede ndaphila ubomi obanelisayo nobunenjongo.
Iimbono Ngemvelaphi Yobomi